TAARIIKHDA CALANKA SOOMAALIYA IYO CALAMADII SOOMAALIDA EE JIRAY BOQOLAAL SANO KA HOR | Laashin iyo Hal-abuur
TAARIIKHDA CALANKA SOOMAALIYA IYO CALAMADII SOOMAALIDA EE JIRAY BOQOLAAL SANO KA HOR
TAARIIKHDA CALANKA SOOMAALIYA IYO CALAMADII SOOMAALIDA EE JIRAY BOQOLAAL SANO KA HOR.
Sanadkii 1949 jamciyada quruumaha ayaa ogolaatay in talyaanigu xuriyad gaarsiiyo Soomaaliya , waxaa dusha ka eegayay in xuriyada nala gaarsiiyo Masar, Filibiin iyo kolombiya (Egypt, the Philippines and Columbia) . Xasuusin: Si loo xushmeeyo saddaxdaa waddan ayaa wadada guriga Haweenka gadaal ka marto ee Soomaalidu u taqaan Via Eejito, af Talyaani ,Egypt af Ingiriis, Masar af Caribi, (Masar oo af Talyaaniga lagu yiraahdo Eejito, Engariiska lagu yihaardo Egypt )ayaa loogu magac daray, wadada kale ee dhinaca shaleemada Banaadir ka xigtana waxaa la yiraa Via Filibiin, tan sadaxaad ee ku sii xigtana waxaa la yiraa via Kolombia ,welina magacyadaasi waa ku qoranyihiin waddada dhinaceeda .
Golihii ugu horeeyey ee sharci dajintu waxa uu ka koobnaa 70 xildhibaan,60 Soomaali ah oo xisbiyadu soo xuleen iyo 10 xildhibaan oo loo qaybiyay bulshooyinka kale ee aan Soomaalida aheyn (4 Talyaani ah, 4 Carab ah, 1 Hindi ah iyo 1 Bakistaan ah).
Markii guluhu ka hadlayay arrinta calanka ayaa Md. Maxamed Cawaale Liibaan soo jeediyay in calanka ay ka hadli karaan xildhibaanada Soomaalida ah oo kaliya ,arrintaa waa loo codeeyay waana lagu guuleeystay waxaa loo xil saaray guddi si ku meel gaar ah uu madax uga ahaa Sh. Cumar, waxa uuna soo jeediyay in arrinta berri laga hadlo, habeenkaa ayuu Mr. Liiban gurigiisa tagay. Maalintii xigtay fadhigu wuxuu bilaabmay 10:30 subaxnimo, Md. Liiban ayaa codsaday in hadalka la siiyo gudoomiyihiina waa aqbalay, Md.Liibaan Shaatiga hoostiisa ayuu ka soo bixiyay calanka xabadka ayuuna saartay, asaga oo ku salaaxayo boggiisa, gudoomiyihii ayaa ku ammaaney Md. Liibaan in hal habeen uu calankii ku soo diyaariyay.
Ururkii shaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed ( the Somali labour trade union) ayaa u xil saaray Maxamed Cawaale Liiban in uu soo diyaariyo calanka. Md. Liibaan waxa uu sharaxay sababta uu u xushay calankan, wuxuuna yiri: buluugan cirka u eg waxaan u xushay in aan ku xushmeeyo Jamciyada quruumaha oo xuriyada in aan gaarno gacan nagu siisay oo calankeedu buluug khafiif ah yahay, xidig leh 5ta gees ee hoosta isaga dhegan waa 5tii qayb ee isticmaarku noo qaybiyay, Golahiina waa ansaxiyay. Goobta waxaa la keenay naqshado calama kale oo aan guuleeysan.Fiiri:
FG: Maanta ayaan soo xasuustay qoraalkaa waxan ka helay mid ka mid ah xusuus qoradeydii hore. ogow Calanku waxaa uu leeyahay taariikhdaa, waa Calankii ugu horeeyay ee kulmiyay Soomaalida, loona bixiyay KULMIYE, horeba waa u jireen calama badan oo kala gooni gooni ah dhowr qarni ka hor sida:
Calankii Boqortooyadii Soomaalida ee Awdal
Calanka Boqortooyadii kale ee Zaylac:
Calankii boqortooyadii Ajuuraan
Raali ahaaw haddii aan kugu badiyay qoraalka wixii ka khaldan waad sixi kartaa, ku dari kartaa, dhaliili kartaa, aragtidaada xor ayaad u tahay.